How to remove .RAR .ZIP password??? — MYSTERY ZILLION
How to remove .RAR .ZIP password???
November 2010 edited December 2010 in Sharing
.rar .zip တို့မှာ password ခတ်ထားရင် Extract ဘယ်လိုလုပ်လို့ရလဲ??? ဘာ Software တွေလိုအပ်လဲ?? သိချင်ပါတယ်။
MZ က ကိုကိုတို့ မမတို့ ကူညီပါအုံး .. :P
zip ကတော့ password ဖြည်တာ ရှိပေမယ့် rar ကတော့ မလွယ်။ zip password ဖြည်တာကတော့ software တွေ တော်တော်များများရှိပါတယ်။ မမှတ်မိတော့ဘူး
RAR မှာက AES 128 Bits ကိုသုံးထားပါတယ် Crack လုပ်တဲ့နည်းက Dictionary and Brute Force ပဲရှိပါတယ် အဲဒါကြောင့် password ရဲ့ Strong ဖြစ်မဖြစ်အပေါ် မူတည်ပြီး အချိန်ကြာနိုင်ပါတယ်။ အလကားရနိုင်တဲ့ Crack လုပ်တဲ့ ဆော့ဝဲက cRARK လိုဟာရှိပါတယ် ပိုက်ဆံလည်းမတောင်းသလို အလကားသုံးလို့ရပါတယ်။ အကယ်၍ CUDA ကို Support လုပ်တဲ့ nVidia Graphic Card တစ်ခုခုသာ စက်မှာရှိမယ်ဆိုရင် ပိုအဆင်ပြေပါတယ် ကွန်ပျူတာက Processor အပြင် GPU ကိုပါယူပြီး သုံးမှာဖြစ်တဲ့အတွက် Crack Process ပိုမြန်ပါလိမ့်မယ်။
ကျေးဇူး .. ကိုလူပျိုကြီးရေ ...
ဒေါင်းပြီးပြီ။ လုပ်တာကတော့ အချိန်ပေးရမှာပေါ့ ...
Rar Password Cracker v.4.12, Atomic RAR Password Recovery 1.20 နဲ့တခြားဟာတွေတော့ စမ်းဖူးတယ်။ ရ၀ူး . xD
အဲဒါထက်ပိုမြန်မယ်လို့ထင်ပါတယ် ညီနေမင်း website မှာတင်ထားတာရှိပါတယ်။
အင်း ခင်ဗျားပြောတဲ့ ဟာကဘာမှန်းတော့မသိဘူး password crack လုပ်ရာမှာ နှေးတယ်မြန်တယ်က password ရဲ့ Strength အပေါ်မှာသာ မူတည်ပါတယ် နောက်ပြီးတော့ crack လုပ်တဲ့ software ရဲ့ တည်ဆောက်ပုံအပေါ်မူတည်ပါတယ် cRARK ဟာ CUDA ကိုပထမဆုံး Support လုပ်တဲ့ ဆော့ဝဲလို့ပြောလို့ရတယ် အဲဒါကြောင့် Commercial Software ဖြစ်ပါစေ သူ့ထက်အလွန်ဆုံးမြန်နိုင်ရင် စက္ကန့်ပိုင်းပါပဲ ဘယ်လောက်မှ ပိုမြန်နိုင်မယ်မဟုတ်ဘူး။
crark ကိုမသုံးတတ်ဘူး .. အစ်ကို
သူ့ Site က Download လုပ်လိုက်တဲ့ ဖိုင်က extract လုပ်လိုက်တာ ..
ဘယ်ကဟာကို ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ မသိလို့ .. ကူညီပါအုံး .. ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာ..
ကြည့်ရတာ Manual ကိုဖတ်ကြည့်ပုံမပေါ်ဘူး သုံးတာကလွယ်ပါတယ် ဒါပေမယ့် သူ့ထဲက syntex တွေနည်းနည်းသိဖို့လိုမယ် အောက်မှာပြထားတဲ့ ဖိုင်ကိုဒေါင်းလုပ်လုပ်ပါ အထဲကဖိုင်နှစ်ဖိုင် (password.lst and custom_english.def) ကို cRARk Folder ထဲကိုကူးထည့်လိုက်ပါ။
ပြီးရင်တော့ command prompt ကိုဖွင့်ပြီး cRARk Folder အောက်ကိုသွားပါ သုံးရမယ့် command ကိုအောက်မှနမူနာပြထားပါတယ်။ -l1 ဆိုတာ password length ၁ လုံးကနေစမယ်ဆိုလိုတယ် ၁ ကမစချင်ရင် ကိုယ့်ဟာကိုယ်ပြောင်းပါ -g8 ဆိုတာ အများဆုံး ၈ လုံးလို့ပြောထားတာ ပိုချင်ရင် ပိုထည့်နိုင်တယ်။
crark -l1 -g8 -c -pcustom_english.def your_target_file.rar
ကိုယ်ဘာလုပ်ချင်သလဲ မူတည်ပြီးတော့ custom_english.def မှာပြင်ဖို့လိုမယ် အထဲမှာ Password Defination နမူနာထည့်ထားတယ် Upper, Lower, Digits, Special Char စသည်ဖြင့် ကိုယ်သုံးချင်တဲ့ အပေါ်မူတည်ပြီးတော့ အရှေ့မှာ ထည့်ထားတဲ့ Comment Symbol # ကိုဖြုတ်ပြီးတော့သုံးပါ။ CUDA မရှိတဲ့စက်ဆိုရင် တစ်စက္ကန့်ကို Password 200 ထက်ကျော်ဖို့ခက်နိုင်မယ်။